Weeladaha qubeyska ee lagu dhex dhisay, xal fiican u ah suuligaaga | Bezzia
tubbada qubeyska ee lagu dhex dhisay, xal fiican u ah musqushaada
Maria vazquez | | Dharbaaxo
Ma leedahay musqul yar ama leh geed adag? Midkoodna musqulaha aad ka hesho suuqa kuma qancin? Kuwani waa sababo aan kaa dhigin inaad iska dayso in saxanka lagu qubeysto musqusha. Musqulaha ku dhex jira Waxay yihiin xal aad u fiican oo kaliya oo aan kuu oggolaan doonin inaad ka faa'iideysato booska, laakiin sidoo kale u habayn si ay kuugu habboonaato.
Doorashada tubbada qubeyska ee ku dhex jirta waa mid ka mid ah beddelka badan ee ay tahay in aan siino musqusha meel ku habboon oo lagu maydho. Faa'iidooyinka doorashadan, sidoo kale, waa badan yihiin. Waana taas waxaad dooran kartaa sidaad rabto: afar gees ah ama afar gees ah? Shubka la dahaadhay ama dahaarka dhoobada leh?
1 Faa'iidooyinka tubbada qubeyska ee la dhisay
2 Qalabka musqusha casriga ah
Faa'iidooyinka tubbada qubeyska ee la dhisay
Musqulaha lagu dhex dhisay ayaa kuu ogolaanaya la qabso shaygan sifada musqushaada. Tanina waa sabab ku filan oo muhiim ah oo lagu sharadinayo iyaga oo ku jira musqulaha yar yar ama adag sababtoo ah naqshadooda ama qaab dhismeedka. Suurtagalnimada in la habeeyo waa mid ka mid ah faa'iidooyinka nooca qubeyska, laakiin waxaa jira wax badan!
Waxay yihiin xalka ugu habboon ee lagu siin karo musqusha qubeyska musqulo leh astaamo adag mar haddii loo sameeyay cabbir.
Adigoo habayn kara waad awoodaa dooro cabbirka, qaabka iyo dhererka tubbada qubeyska si aad ula qabsato sida ugu fiican labadaba suuligaaga iyo qoyskaagaba. Laga soo bilaabo musqusha leydi-geeska ah ee caadiga ah, ilaa mid afar gees ah ama gees gees ah, maxaa diidaya?
Waad awoodaa dooro agabka bannaanka iyo gudaha musqusha, marka la waafajiyo bilicda ama qaabka aad raadinayso.
Waxay kuu oggolaanayaan inaad midayso daaha musqusha. Waxaad ku dabooli kartaa tubbada qubayska isla dahaarkii aad u isticmaashay sagxadda ama darbiyada, si aad u hesho meel casri ah oo nadiif ah sida spa.
Si faa'iidooyinkan aysan mustaqbalka u dhalanin sababtoo ah dhibaatooyinka qoyaanka ama qulqulka, waa inaad ku aamina xirfadle fulintiisa. Biyo-celin wanaagsan ayaa lagama maarmaan ah si looga fogaado iyaga, markaa weydii oo ku dalbo shaqada shirkad ama xirfadle tixraac leh.
Qalabka musqusha casriga ah
Marble, ceramics, microcement, shubka la safeeyey, rinji farsamo oo leh caabbinta sare ee huurka... Kuwani waa qaar ka mid ah agabyada ugu baahida badan maanta si ay u daboosho labada musqul ee la dhisay iyo sagxadaha iyo darbiyada. musqulaha casriga ah iyo kuwa casriga ah sida kuwa aan maanta soo jeedinayno.
Ma odhan karno dhammaan kuwa la sheegay waxay leeyihiin, si kastaba ha ahaatee, door isku mid ah. Waxaa jira laba ka soocan inta kale oo ay u badan tahay inaad mar hore ka soo saartay sawirada. Dhab ahaantii! Mid ka mid ah waa microcement-ka, kaas oo dabaqa sidoo kale si caadi ah loo daboolay, si loo gaaro korka joogtada ah ee musqulaha rustic iyo kuwa casriga ah labadaba.
iyo sida caanka ah sida microcement-ka in lagu xidho musqulahaas oo leh musqul gudaha ah waa alaab dhoobo ah. Kuwan waxa kale oo loo isticmaali karaa gidaarada iyo sagxadaha labadaba iyo sidoo kale miiska dushiisa, si loo gaadho dareenka spa ee aanu hore uga hadlaynay. Dufanka qaababka waaweyn iyo tones cawl ayaa ah kuwa ugu baahida badan laakiin, dabcan, maahan fursadaha kaliya ee suuqa.
Haddii aan ka hadalno musqulaha la dhex dhisay iyo daboolka musqusha, aan sidoo kale ka hadalno isbeddellada. Mideeya dahaarka musqusha maanta waa isbeddel. Haa, maaha wax nasiib ah in inta badan sawirada nagu dhiirigeliya maanta inay helaan quruxda ugu yar oo nadiif ah oo siinaya dahaar gaar ah. Quruxda quruxda kugu martiqaadaysa inaad nasato oo miyaanay taasi ahayn waxa aanu doonayno marka aanu maydhayno?
Dabcan qof kastaa ma jecla isbeddelkan oo wuxuu diyaar u yahay inuu la qabsado. Haddii aad fikraddaas leedahay, waxaad sharad ku geli kartaa adigoo isticmaalaya daahan isku mid ah oo ku dhex jira tubbada qubeyska iyo gidaarka ama sagxada, sharadka alaabta kale ee dhoobada ah ama alwaax si ay u abuuraan kala duwanaansho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Dharbaaxo » tubbada qubeyska ee lagu dhex dhisay, xal fiican u ah musqushaada
niyad-jabka carruurta iyo dhalinyarada